करिब साढे १४ अर्बको मकै आयात ! कुन देशबाट कति ल्याइयो ? - Arthatantra.com
काठमाडौं । कृषि प्रधान देश नेपालबाट वर्षेनि मकै आयातमा नै अरबौं रुपैयाँ बाहिरिन्छ भन्दा पत्याउन गाह्रो हुनसक्छ । तर त्यो सत्य हो ।
भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनासम्ममा १४ अर्ब बढीको मकै आयात भएको देखिएको छ । जेठ मसान्तसम्म १४ अर्ब ३९ करोड ९९ लाख ९ हजार रुपैयाँको ५ लाख ३७ हजार ९१३ मेट्रिक टन मकै आयात भएको विभागले जनाएको छ । नेपालमा विश्वका एक दर्जन बढी देशहरुबाट मकै आयात हुने गरेको छ ।
नेपालमा छिमेकी मुलुक भारतबाट सबैभन्दा बढी मकै आयात भएको छ । चालु आवको ११ महिनासम्ममा उक्त देशबाट १३ अर्ब ६८ करोड ८६ लाख ८३ हजार रुपैयाँ बराबरको मकै आयात भएको विभागले जनाएको छ । भारतबाट जेठमसान्तसम्म ५ लाख २८ हजार ६९७ मेट्रिक टन मकै आयात भएको हो ।
उक्त अवधिमा अर्जेन्टिनाबाट ५१ करोड ३७ लाख २९ हजार रुपैयाँ बराबरको ६ हजार ५६९ मेट्रिक टन, ब्राजिलबाट ११ करोड ५६ लाख ३२ हजार रुपैयाँ बराबरको १ हजार ५८० मेट्रिक टन, साउथ अफ्रिकाबाट ५ करोड ९१ लाख ९५ हजार रुपैयाँ बराबरको ७९० मेट्रिक टन, अमेरिकाबाट २ करोड १७ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बराबरको २७६ मेट्रिक टन मकै आयात भएको छ ।
यस्तै, थाइल्याण्डबाट ३ लाख १५ हजार रुपैयाँ बराबरको ९० केजी, जिम्बाववे १३ हजार रुपैयाँ, नाइजेरिया ३ हजार रुपैयाँ बराबरको मकै आयात भएको छ । त्यसैगरी नेपालमा मलेशिया, स्वीटजरल्याण्ड, चीन अफ्गानिस्थान लगायतका मुलुकबाट मकै आयात भएको छ । मकै आयातबाट सरकारले ७५ करोड ६४ लाख ११ हजार रुपैयाँ राजस्व प्राप्त गरेको छ ।
वि.सं.२०७८ असार १५ मंगलवार १४:१२ मा प्रकाशित
अघिल्लाे राधी विद्युतसहित तीन कम्पनीको सेयर मूल्यमा उच्च गिरावट, प्रतिकित्ता कुनको कति घट्यो ?
पछिल्लाे नागरिक लगानी कोषका सहभागी सबैलाई थप प्रतिफल दिने, कति प्रतिशत ?